Football Khabar » कोपाको अन्तिम तयारी : अर्जेन्टिना र निकारागुवा भिड्दै, मेस्सी खेल्लान् ?
कोपाको अन्तिम तयारी : अर्जेन्टिना र निकारागुवा भिड्दै, मेस्सी खेल्लान् ?
जुन १४ बाट ब्राजिलमा सुरु हुने कोपा अमेरिका फुटबलको तयारीमा रहेको अर्जेन्टिनाले भोलि (शनिबार) बिहान मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ । कोपाका तयारीका रूपमा उसले मध्यअमेरिकामा पर्ने निकारागुवासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो ।
यो खेल खेलेपछि अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका खेल्न ब्राजिल प्रस्थान गर्नेछ । निकारागुवासँग हुने खेल नेपाली समयअनुसार भोलि (शनिबार) बिहान ५ः५५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
कोपाको तयारीका रूपमा लिइएको सो खेलमा टोलीका कप्तान लिओनल मेस्सीसहितका प्रमुख खेलाडीलाई खेलाउने तयारी लियोनल स्कालोनीले गरेका छन् । उनले यस खेललाई आफ्नो टिमको ताजा अवस्था बुझ्ने खेलका रूपमा लिएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति २४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ११:२०